ဗယာကြော် ပူပူလေး ~ စန္ဒကူး
လုပ်စားကြည့်ချင်တယ်... ဘာပဲနဲ့လုပ်တာလဲ... ကုလားပဲလား?
အစားအသောက်မီးလိုတောက်တဲ့သူဆိုတော့ ရှေ့ဆုံးက ဗယာကြော်အားကြီးကြိုက် ကိုယ်တိုင်တော့ကြော်စားဖူးဘူး သုတ်စားလည်းကြိုက်တယ် ဒီတိုင်းစားလည်းကြိုက်တယ် အကြော်ထဲမှာ ဗယာကြော်အကြိုက်ဆုံး ဗူးသီးကြော်အမုန်းဆုံး မမကူးနှိုက်စားသွားတယ်နော် ကျေးဇူး :)
ဒီမှာတော့ ready made အမှုန့်နဲ့ဘဲကြော်လိုက်တယ်။ ငရုတ်သီး၊ပူစီနံလေးရယ်နဲ့လိုက်တယ်နော်
ဗယာကြော် အရမ်းကြိုက်တာ။။များကြီး များကြီး စားသွားတယ်။။။။ငရုတ်သီးပင် ပူတီနံပင်တွေ စိုက်တယ်ဆို။။။မျိုးစေ့တွေ ဘယ်မှာ ၀ယ်တာလဲဟင်။ တို့လဲ စိုက်ချင်တယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ. ဘယာကြော် ...
ရှယ်ဘဲ ... ဘယာကြော် ပူပူလေးဆိုတော.
လမ်းဘေးမှာ အော်ရောင်းတဲ. ကုလားကြီး
စန္ဒကူးရဲ့ ဘယာကြော်က စားချင်စရာလေး။
ငယ်ငယ်ကဆို ထမင်းပူပူနဲ့ အကြော်နဲ့ အချဉ်နဲ့ စားတာ။
လမ်းဘေးက ဘယာကြော် ကုလားကြီးဆီကလဲ စားတာပဲ။
သန့်လား မသန့်လား ကြည့်မနေပါဘူး။ သူတို့ကြော်တာ ပိုအရသာရှိတယ်တောင် ထင်သေး။ :)
ရုတ်သီးတွေက စပ်မယ့်ပုံပဲ။ ဗယာကြော် ပူပူလေး နဲ့ ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ ကောင်းလိုက်တာဗျို့။ ရေနွေးကြမ်းတော့ အိမ်က သယ်လာရတာပေါ့လေ။
ဘရာကြော် ၁၀ ဖိုးလောက်ပေးပါဦး
အင်မတန်ကြိုက် အသေအလဲကြိုက် ဗယာကြော်ကို။ ဒါမယ့်ကုလားမကြိုက်ဘူးနော်
ကိုယ်ကြားဖူးတာ တခုပါ။ အိန္ဒိယ ဘယာကြော်ကို ငရုတ်သီး အိန္ဒိယအော် နဲ့ တွဲရောင်းတဲ့ အိန္ဒိယကြီးတစ်ယောက် သရက်သီး အိန္ဒိယတည်တွေစားပြီး ပက်လက် အိန္ဒိယထိုင်ပေါ်မှာ အိန္ဒိယသေ အိန္ဒိယမော အိပ်ပျော်နေတယ်တဲ့။
ဟားဟား ဘာမှတော့ မဆိုင်ပါဘူး။ ရီရတာလေး ပြောပြတာ။
ဗမာပြည်မှာတုန်းကတော့ ကုလားပဲ ဘယာကြော်ထက် မတ်ပဲဘယာကြော်ကို ပိုကြိုက်တယ်။ ခုတော့ ငတ်နေလို့လား မသိဘူး။ ဘာမြင်မြင် စားချင်နေတော့တာ။